ဘတ်စ်ကားအတွက် HPC168 3D အလိုအလျောက်ခရီးသည်အရေတွက်ကင်မရာ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဖြေရှင်းချက် » ပြည်သူ့ကောင်တာ » ခရီးသည်ကောင်တာ / DVR
ဘတ်စ်ကားအတွက် HPC168 3D အလိုအလျောက်ခရီးသည်အရေအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘတ်စ်ကားကောင်တာသည်နောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်သစ်ချစ်ပ်များကိုအသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောတွက်ချက်မှုတိကျမှု၊ အမြန်တွက်ချက်မှုအမြန်နှုန်းနှင့်အမှားအယွင်းအနည်းငယ်ရှိသည်။ ပရိုဆက်ဆာနှင့် 3D ကင်မရာအပါအ ၀ င် hardware အားလုံးအတူတကွပေါင်းစည်းထားပါသည်။
၁။ ရိုးရိုးတပ်ဆင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ကစားခြင်း၊ ပရိုဆက်ဆာနှင့်ကင်မရာများကိုပေါင်းစည်းခြင်း ၁ ခုရှိစနစ်တပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။
4. စျေးကွက်ရှိခရီးသည်ကောင်တာအများစုသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးသတ္တုကိုယ်ထည်များဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်အလေးချိန်အလွန်လေးလံသည်။ အဆင်မပြေသောတပ်ဆင်ခြင်းအပြင်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အလွန်စျေးကြီးသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ bus ကောင်တာသည် ABS shell ကိုအသုံးပြုသည်။ processor နှင့်ကင်မရာလည်းပေါင်းစပ်ထားသည်။ အလေးချိန်သည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီးအလေးချိန်သည်အခြားခရီးသည်ကောင်တာများ၏အလေးချိန်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းကုန်စည်များကိုများစွာသက်သာစေသည်။
၅။ ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ပြန်အခွံသည်ပေါင်းစည်းထားသောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ Mount bracket နှင့်ကင်မရာတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားပြီး ၁၈၀ ဒီဂရီလည်ပတ်တပ်ဆင်ခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းသည်တုန်ခါမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက် ABS ကိုအသုံးပြုသည်။
၆။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘတ်စ်ကားခုံသည်ခရီးသည်များအားပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်စက်ဝိုင်းပုံပုံစံဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဆက်သွယ်မှုလိုင်းများအားလုံးဝှက်ထားသောတပ်ဆင်နေကြသည်။ အားသာချက်ကတော့ဒီဒီဇိုင်းဟာလှပပြီးတာရှည်ခံရုံသာမကအလုပ်သမားများစွာကိုပါသက်သာစေပါတယ်
တစ်ကြိမ်နှိပ်ခြင်းချိန်ညှိခြင်း - အဖြူရောင်ခလုတ်ကိုထိပါ၊ ၅ စက္ကန့်အတွင်းအလိုအလျောက်ချိန်ညှိခြင်းပြီးဆုံးသွားလိမ့်မည်။ သင်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ရန်ကွန်ပျူတာကိုတောင်မလိုအပ်ပါ။ (ချိန်ညှိသည့်အချိန်တွင်ကောင်တာအောက်၌မရပ်ပါနှင့်)
ပါ ၀ င်သည့်ပုံရိပ်ဖော်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစနစ်၊
အလျားလိုက် ဦး တည်ချက်နှင့်အတူအချို့သောထောင့်စောင်းခွင့်ပြု Algorithm ဆုံးမပဲ့ပြင် function ကို, သပ္ပါယ်မှန်ဘီလူးထောင့်, အာရုံစူးစိုက်သတင်းအချက်အလက်,
ခရီးသည်များ၏ကိုယ်ထည်၊ အဝတ်အစား၊ ဆံပင်အရောင်၊ ဦး ထုပ်နှင့်ပဝါတို့ကြောင့်ရေတွက်ခြင်းကိုတိကျမှန်ကန်မှုမရှိပါ။
ဘတ်စ်ကားတံခါးခလုတ်၏ခလုတ်သည်အခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်တံခါးကိုဖွင့်သောအခါရေတွက်သည်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီစာရင်းအင်းအချက်အလက်များဖမ်းယူသည်၊ တံခါးကိုပိတ်သောအခါရေတွက်ခြင်းကိုရပ်တန့်သည်။
ပြင်ပအလင်းကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိသောပုံရိပ်အရိပ်များ (သို့) အရိပ်များကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိသောရာသီဥတုနှင့်ရာသီဥတုတို့ကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိသောညအချိန်၌အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြည့်သည့်အလင်းကိုအလိုအလျောက် activate လုပ်သည်။
တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး ၁၈၀ ဒီဂရီတပ်ဆင်နိုင်သည်
ဘတ်စ်ကားအတွက် HPC168 3D အလိုအလျောက်ခရီးသည်အရေအတွက် Live installation
ဘတ်စ်ကားအတွက် HPC168 3D အလိုအလျောက်ခရီးသည်အရေအတွက် provides rich data interface:
1. RJ45 ကွန်ယက်ကို interface ကို
RJ45 Interface နှင့် HPC168 တန်ပြန်ချိတ်ဆက်မှု၊ client tool program ၏မြင်ကွင်းများသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေကိုသတ်မှတ်ပြီး parameters များကိုလည်ပတ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ HPC168 ကောင်တာသည်ခရီးသည်စီးဆင်းမှုအချက်အလက်များကို RJ45 network interface မှတဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဆာဗာသို့အချိန်မီပို့သည်။
2. Composite ဗီဒီယိုကို output interface ကို
3. RS485 interface ကိုသို့မဟုတ် RS232 interface ကို
အချက်အလက်ခေါ်ဆိုမှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်၊ baud နှုန်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအိုင်ဒီနံပါတ်များအတွက်တတိယပါတီပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်တစ်လမ်းသွား RS485 သို့မဟုတ် RS232 ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
4. ယာဉ်တံခါးကို switch ကို signal ကို
8-36V ဗို့အားအကွာအဝေးမော်တော်ယာဉ်တံခါးကို switch ကို signal ကို input ကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်တံခါးပိတ်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် HPC168 ကောင်တာသည်ရေတွက်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းထားသည်။
ဗီဒီယို interface √ √
Compare Our ဘတ်စ်ကားအတွက် HPC168 3D အလိုအလျောက်ခရီးသည်အရေအတွက် အခြားသူများနှင့်အတူ